သက်ဝေ: အကူး အပြောင်း
ကိုကိုးအိမ်(မန္တလေး) December 27, 2012 at 12:14 AM
လွမ်းစရာကြီးဗျာ.... သိပ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မဂ္ဂဇင်း.... ပုံနှိပ်အနေနဲ့လည်း ဆက်ရှိနေစေချင်တယ်....... ပြောသာပြောရတာပါ... ကိုယ်တိုင်ကလည်း အီးဘုတ်ပဲဖတ်ဖြစ်တာများတယ်..
Hmoo December 27, 2012 at 2:33 AM
mstint December 27, 2012 at 9:28 AM
အွန်လိုင်းခေတ်မှာ ပုံနှိပ်တွေ တစ်နေ့တစ်ခြားကျဆင်းလာပြီး အွန်လိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်တွေ တိုးတက်လာတဲ့အတွက် News-Week ကို အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်တော့မယ်ဆိုတာ စီးပွားရေးရှုထောင့်က မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိတယ် မသက်ရေ။ ဗဟုသုတအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ဇွန်မိုးစက် December 27, 2012 at 12:51 PM
စာအုပ်နဲ့ဖတ်ရတာကိုပဲ ကြိုက်တယ်။း((
အပြုံးပန်း December 27, 2012 at 1:01 PM
yes. I love books! not Ebook.
NSA December 27, 2012 at 2:47 PM
Newsweek အဟောင်းတွေကို ဗလာစာအုပ်အဖုံးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးရုံအပြင် သေချာမဖတ်ခဲ့ဖူးဘူး..လှန်လှောကြည့်ရုံပဲ ..။ဒါပေမယ့် ပုံမနှိပ်တော့ဘူးသိရတော့လည်း ဝမ်းနည်းစရာလိုလို....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 29, 2012 at 1:40 PM
ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေမှုအတွေအကြောင်း ဖတ်ရတိုင်း စိတ်ထဲမှာ နာကျင်သလို ခံစားမိတယ်
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်အသုံးများလာတာနဲ့အမျှ စာအုပ်ကိုင်ပြီး စာဖတ်တဲ့အချိန် နည်းလာတာကို တကယ်ဝန်ခံမိပါတယ်။
Nwai La January 5, 2013 at 11:20 AM
စာအုပ်ကိုင်ပြီး အရသာမရှိတာတော့ အမှန်ပဲ
ဒါပေမဲ့ အစ်မ ပြောသလိုပဲ
မြသွေးနီ January 22, 2013 at 5:02 PM
စာဆို ဘာနဲ့ရေးရေး ဖတ်ချင်တယ်...။ ဖတ်ချင်တဲ့ စာဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ တစ်ခုရှိတာက စာအုပ်ကျတော့ အိပ်ရာထဲ ဇိမ်ကျကျနဲ့ နှပ်ပြီး ဖတ်လို့ရတာပေါ့။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို လက်ခံဖို့ အသင့်ဖြစ်သူနဲ့ မဖြစ်သေးသူတွေ ရှိနေဦးမှာပဲနော်။ ဒီမှာတော့ အဲ့လိုပြောလို့မရသေးဘူး.. တစ်လကို စာအုပ်ရေ ၂၀၀ကျော် ထွက်နေတယ်။ စာအုပ်ဟောင်းတွေ နောက်ပိုင်း ပိုဈေးကြီးလာမယ့် သဘောရှိတယ်၊